Trainline Buy cheap bus & train tickets for Europe 79.0.0.42075 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 79.0.0.42075 လြန္ခဲ့ေသာ 15 မိနစ္က
Application မ်ား ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း Trainline Buy cheap bus & train tickets for Europe
Trainline Buy cheap bus & train tickets for Europe ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Trainline သင်္ဘောမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် - ဥရောပရဲ့ဦးဆောင်ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကား app ကို။
စာအုပ်ရထားလက်မှတ်တွေနဲ့ Trainline နှင့်အတူစျေးပေါဘတ်စ်ကားခရီးသွား - ဥရောပရဲ့ဦးဆောင်ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကား app ကို။
သင်၏နောက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာခရီးရထားလမ်းသို့မဟုတ်လမ်းအားဖြင့်ဗြိတိန်နှင့်ဥရောပ၏ကျန်တလွှားသွားလာသို့မဟုတ်ပင်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်အသွားအပြန်များအတွက်မီးရထားကိုပုံမှန်အတိုင်းရှာဖွေလက်မှတ်တွေဝယ်စတင်ပါ။ GWR, LNER, အမျိုးသား Express ကိုနဲ့တခြားဥရောပရထားလမ်းလိုင်းများ, ဗာဂျင်းရထားများအတွက်စျေးပေါလက်မှတ်တွေကိုရှာပါ။ သို့မဟုတ်သင်ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်ဝယ်ဖို့လိုလျှင်ရိုးရှင်းစွာရှာဖွေပြီး app ကိုတိုက်ရိုက်စာအုပ်ဆိုင်။
သင်သည်သင်၏ဥရောပရထားလမ်းလက်မှတ်တွေဝယ်ခင်ရထားစျေးနှုန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်။ ဒါဟာဥရောပနှင့်ကမ္ဘာ၏ကျန် 45 နိုင်ငံများရှိရထားလမ်းသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားအားဖြင့်သင့်ကိုနိုင်ငံတကာခရီးစဉ်များစီစဉ်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်! ယနေ့သင်၏နောက်ဥရောပစွန့်စားမှုအဘို့အစျေးပေါရထားလက်မှတ်တွေသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်တွေရယူပါ!
သင်သည်သင်၏လာမည့်ခရီးစီစဉ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ app ကို အသုံးပြု. အားလုံးစျေးပေါရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်မတိုင်မီဘတ်စ်ကားလက်မှတ်သို့မဟုတ်မီးရထားစျေးနှုန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ (ဗြိတိန်ရထားလမ်းများအတွက်, Trenitalia, Renfe နှင့် SNCF လမ်းကြောင်း) တိုက်ရိုက်ရထားကြိမ်, စျေးနှုန်းသတိပေးချက်များ, မိုဘိုင်းလက်မှတ်တွေ / etickets နှင့်ထိုင်ခုံရွေးချယ်ရေး (ဘယ်မှာရှိနိုင်ပါ) နဲ့သင့်ရဲ့ခရီး၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အမြဲပါပဲ။ စာအုပ်လက်မှတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို အသုံးပြု. ယနေ့သင့်ရဲ့ခရီးကိုစတင်ပါ။
အဘယ်ကြောင့် Trainline? ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်တွေ, ဥရောပရထားခရီးသွား, စျေးပေါလက်မှတ်များနှင့်ထို့ထက် ပို. Buy!
•တစ်နေရာတည်းတွင်အားလုံးကိုသင့်ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားခရီးအဘို့ဝယ်လက်မှတ်တွေ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုတခုတခုအပေါ်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်-ဖွယ်ရှိနေသည်ခရီးစီစဉ်ထားသည်။
• 260 ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားကုမ္ပဏီများ၏ထံမှရထားနှင့်ဘတ်စ်ကား options များနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်စျေးပေါလက်မှတ်တွေရှာပြီးသင်တို့အဘို့အညာဘက်ဖြစ်ကြောင်းဘတ်စ်ကားလက်မှတ်ကိုဝယ်ကြလော့။
•ယ်ယူရန်ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်များနှင့်သင်နှစ်သက်တဲ့ငွေကြေးအတွက်စျေးပေါရထားလက်မှတ်တွေရဖို့ - အမေရိကန်ဒေါ်လာ, ပေါင်, EUR, AUD, CAD, CHF နှင့် SEK အတွက်ရရှိနိုင်။
• PayPal ကအတူယ်ယူရန်လက်မှတ်တွေအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အဓိကကရက်ဒစ်ကတ်များနှင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်။
•ဗြိတိန်ရထားလမ်းဝန်ဆောင်မှုများ, Eurostar, SNCF, Thalys နှင့် Renfe အပေါ်စျေးပေါလက်မှတ်တွေအပေါ်အကျိုးခံစားခွင့်ရဖို့သစ္စာရှိမှုနှင့်အလျှော့စျေးကတ်များထည့်ပါ။
•ကြိုတင်သို့မဟုတ်ခရီးသွားများ၏နေ့၌စာအုပ်လက်မှတ်တွေ, ထွက်ခွာမတိုင်မီအထိ 15 မိနစ်နှင့်တိုက်ရိုက်ရထားကြိမ်စစ်ဆေးပါ။
•ဘူတာရုံစီတန်း skip ရန်သင့်ဖုန်းပေါ်မှာလက်မှတ်ဝယ်ရန်။ ရွေးချယ်ထားသည့်လမ်းကြောင်းအပေါ်ရရှိနိုင်မိုဘိုင်းလက်မှတ်တွေနဲ့ etickets ။
• Eurostar (ဗြိတိန်, ပြင်သစ်နှင့်နယ်သာလန်)
• Heathrow Express ကို (ဗြိတိန်)
• GWR (ဗြိတိန်)
•အမျိုးသား Express ကို (ဗြိတိန်)
•လန်ဒန် Overground (ဗြိတိန်)
• SNCF (ပြင်သစ်)
• TGV Lyria (ပြင်သစ်)
• Thalys (ပြင်သစ်)
• Trenitalia (အီတလီ)
• Renfe (စပိန်)
• Alsa (စပိန်)
• Deutsche Bahn (ဂျာမနီ)
• SBB (ဆွစ်ဇာလန်)
• NS (နယ်သာလန်)
• SNCB (ဘယ်လ်ဂျီယံ)
• Flixbus နှင့်အများကြီးပိုပြီး ...
သငျသညျဘတ်စ်ကားလက်မှတ်ဝယ်ဖို့သို့မဟုတ်မီးရထားအဆနှိုင်းယှဉ်ချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာသင်ရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဥရောပရထားလမ်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက် Trainline အပေါ်အားကိုးနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်လက်မှတ်များနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ခရီးပျော့သွားတာကို-အခမဲ့သေချာအောင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အခမဲ့ Trainline app ကို download လုပ်ရယူ, ဥရောပတစ်လွှားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှရထားကြိမ်, စျေးပေါရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်များ။
မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါသလား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေးအဖြေများဖတ်ရန်: https://www.thetrainline.com/en/help/
လူမှုရေးအပေါ် Trainline Follow:
• Facebook မှ: facebook.com/trainline.eu
• Instagram ကို: @trainline
Trainline Buy cheap bus & train tickets for Europe အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Trainline Buy cheap bus & train tickets for Europe အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Trainline Buy cheap bus & train tickets for Europe အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Trainline Buy cheap bus & train tickets for Europe အား အခ်က္ျပပါ
dlnraja စတိုး 696 246.27k
Trainline Buy cheap bus & train tickets for Europe ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Trainline Buy cheap bus & train tickets for Europe အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 79.0.0.42075
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.thetrainline.com/buytickets/terms.aspx#privacy
App Name: Trainline Buy cheap bus & train tickets for Europe
Release date: 2019-09-16 23:39:53
လက်မှတ် SHA1: F1:B3:11:16:76:02:38:C0:CE:FD:39:1C:FB:57:57:2A:B2:DA:9F:16
ထုတ်လုပ်သူ (CN): thetrainline
အဖွဲ့အစည်း (O): thetrainline
Trainline Buy cheap bus & train tickets for Europe APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ